Ii-Cottages - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu esemaphandleni sinombuki zindwendwe onguLilja Sigríður
Izindlu ezimbini, i-cottage nganye ine-50m2 + attic (umgangatho wokulala) 20m2.
Ezo zindlu ziquka:
- amagumbi amabini okulala, enye ineebhedi ezimbini ezibubanzi obuyi-80cm kwaye enye inobhedi obuyi-140cm ububanzi,
- Igumbi lokutyela,
- igumbi lokuhlambela elineshawa
I-cottage yenzelwe abantu abaninzi aba-4.
Uneseti yelinen equkiweyo: umqamelo onecasi, iduvet enecasi, ishiti kunye neetawuli.
Ezo zindlu zangasese zigqwesile unyaka wonke, zigqunywe kakuhle kwaye zifudunyezwe nge-geothermal
Ixesha lokungena liqala ngo-5:00 emva kwemini kwaye lihlala kude kube ngu-8:00 ebusuku.
Izindlu zangasese zaseHlíð yinxalenye yeHlíð Ferðaþjónusta yindawo enzima yendawo yokuhlala kunxweme olusemantla echibi iMývatn, kanye phantsi kwesikhululo seenqwelomoya. Simi malunga nekhilomitha enye ukusuka echibini, embindini webala lelava yeminyaka engama-300 kwaye sinombono omangalisayo phezu kwechibi.
- I-Campground: Umbane uyafikeleleka kwaye iishawa ezifudumeleyo zikhululekile kwiindwendwe.
- Ihostele: indawo yebhegi yokulala (ibhedi ayiqukwanga) okanye amagumbi oSapho (anelinen yokulala ebandakanyiweyo) kwiHostele yethu,
-Izindlu ezincinci I-Mini Cottage: abantu aba-2 9m2 i-cabin equka indawo yokulala eneebhedi ezimbini ngaphakathi. Zonke izibonelelo (izindlu zangasese, iishawari, ikhitshi) zikwindawo engqonge inkampu yethu, zonke ezo zimalunga ne-100-300 m kude nendlwana yakho.
Ibhedi & nesidlo sakusasa: Igumbi le-12m2 liqulathe igumbi lokuhlambela labucala.
-IiCottegs/amagumbi: abantu aba-4 baxhotyiswe ngokupheleleyo ziindlu zasehlotyeni ezinombono omangalisayo phezu kwechibi kunye nebala lelava.
-I-Aska deluxe cabin: abantu aba-2 abaxhotyiswe ngokupheleleyo bendlu enombono omangalisayo phezu kwechibi kunye nentsimi yelava.
Ungarenta iibhayisekile nokuba yimini enye okanye isiqingatha ngosuku. Iimephu ezineendlela zokuhamba intaba kunye nebhayisekile ziyafumaneka kwiziko lethu lenkonzo. Indlela yelizwe ebukekayo eyi-37 km ubude ijikeleza echibini, ilungele ukukhwela ibhayisekile.
4.64 · Izimvo eziyi-58
Umbuki zindwendwe ngu- Lilja Sigríður